Global Voices teny Malagasy · 30 Avrily 2010
30 Avrily 2010
Tantara tamin'ny 30 Avrily 2010
Soudan: Inona no azo tsoahina tamin'ny fifidianana?
Afrika Mainty 30 Avrily 2010
Nifarana tamin'ny 15 aprily lasa teo ny fifidianana tany Soudan, kanefa, na dia mifarana aza izany dia mbola resabe ny fangaraharana sy maha azo antoka azy eo amin'ireo mpanao politika sy ireo mpanara-maso iraisam-pirenena ary ireo olom-pirenena tsotra ao anatiny sy ivelan'i Soudan. Andeha hojerena ny hevitry ny iraisam-pirenena mikasika...
Amerika Latina 30 Avrily 2010
Mampiseho ny fitiavan'izy ireo manokana ny fikarakarana nahandro ao anatina karazana blaogy maromaro mahasarika ireo mpitoraka blaogy any Costa Rica, feno ireo fomba arahina sy ireo sary. Misarika ny maso sy mampahazoto homana ireo mpamaky blaogy Ireto karazana sakafo mahasalama, mamy, sy efa voafantina ireto. Miainga amin'ireo efa mpahandro mankany amin'ireo mpitoraka blaogy tsotra liana amin'ny sakafo ireo mpitoraka blzogy manoratra mikasika izany, izay tsy mikasa ny hampiseho ireo fomba fanaovana sakafo ihany, fa mandrisika ihany koa ireo mpamaky hizatra hanao sakafo.